काठमाडौं महानगरले सुरु गर्यो ६ ठाउँमा फ्रि वाईफाई, यस्तो छ प्रयोग गर्ने सिस्टम ? — Motivatenews.Com
काठमाडौं महानगरले सुरु गर्यो ६ ठाउँमा फ्रि वाईफाई, यस्तो छ प्रयोग गर्ने सिस्टम ?
भदौ १७, काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरसहित ६ स्थानमा फ्रि वाईफाई सेवा सुरु गरेको छ । पशुपतिनाथ, बौद्ध, शंखपार्क, बालाजु बाइसधारा उद्यान, स्वयम्भु, बसन्तपुर हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा फ्रि वाईफाईको उपभोग गर्न पाइनेछ ।
ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्ड लिंकसँग मिलेर महानगरले ६ स्थानमा फ्रि वाईफाई सेवा दिएको हो । फ्रि वाईफाई सेवाको आइतबार महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले उद्घाटन गरे । महानगरलाई निःशुल्क वाईफाई क्षेत्र बनाउन परीक्षण भइरहेको मेयर शाक्यले बताए ।
यसरी चलाउन सकिन्छ फ्रि वाईफाई
सेवा जडान भएका क्षेत्रमा स्मार्ट फोन प्रयोगकर्ता पुगेपछि सिस्टमले नेटवर्क भएको नोटिफिसन पठाउँछ । यसमा थिचेपछि एउटा पेज खुल्छ । पेजमा नाम र मोवाइल नम्बर भर्नुपर्छ । यसरी विवरण भरिसकेपछि सिस्टमले मोवाइलमा एउटा कोड पठाउँछ ।
त्यो कोड भरिसकेपछि वाईफाई चलाउन सकिन्छ । सेवामा सवैको पहुँच पुगोस् र दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि प्रयोगकर्तालाई एक पटकमा ३० मिनेट समय दिइनेछ । ३० मिनेट पुगेपछि सिस्टमले उसलाई त्यसदिनका लागि कनेक्सन हुनबाट रोक्नेछ । तर, उसका लागि अर्को एक्सेस प्वाइन्ट भने खुल्ला नै रहनेछ । एक जनाप्रयोगकर्ताले एकै दिनमा एउटै डिभाइस (फोन वा ल्यापटप) बाट सेवा लिँदा दोश्रो पटकदेखि इमेल ठेगानासमेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सुरक्षाका दृष्टि यसो गरिएको महानगरले जनाएको छ ।
२०७५ भदौ १७ गते प्रकाशित